Co3 3ng, Studios For Sale and For Rent in Colchester, Essex
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Amakhaya okuhlala Studios Essex Colchester
I-1-2 yoluhlu lwe-2
I-3 Flat Flat iyathengiswa eColchester, Essex
This luxury apartment forms part of an exquisite Victorian building, thoughtfully converted, allowing for executive living on one of the most prestigious roads in Colchester. Beverley Road in Lexden boasts an array of stunning homes, allows for easy access to Colchester town centre, popular schoolin...
Kwintengiso | 3 iibhedi | 2 ibhafu
Colchester in Essex, Co3 3ng
Published by Knight West
359,995 Pound £
umbono Flats ishicilelwe kwiinyanga 2 ezidlulileyo
Set within one of Lexden's most desirable roads and situated within this spectacular Victorian conversion, is this luxurious three bedroom apartment, beautifully occupying the first floor of this charming building. Providing an abundance of period charm throughout and retaining many historic feature...
Kwintengiso | 3 iibhedi | 1 ibhafu
Published by Michaels Property Consultants
Iflethi ye studio Amagumbi amancinci amancinci anezinto ezizezawo abizwa ngokuba zi studio, ukusebenza kakuhle okanye amagumbi aphantsi e-US, okanye kwigumbi lokubhala e-UK. Ezi zihlala zinegumbi elinye elikhulu elisebenza njengegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye negumbi lokulala lihlanganisiwe kwaye lihlala libandakanya izibonelelo zasekhitshini, kunye negumbi lokuhlambela elincinci elahlukileyo. Igumbi lokulala i-UK liyahluka kwenye indawo yokuhlala kwigumbi elinye elibandakanya indawo yokuhlambela ekwabelwana ngayo nezinye iibhedi. EKorea, igama kwigumbi elinye (ewinini) libhekisa kwigumbi lesitudiyo.  Ukunyuka usiya kula magumbi kwigumbi elinye, kwigumbi lokulala eliyahlukileyo kwigumbi lokuhlala, lilandelwa ngamagumbi amabini okulala, amathathu igumbi lokulala, njl njl. amagumbi (amagumbi anamagumbi angaphezu kwamagumbi amathathu okulala anqabile kwiimarike ezininzi eziqeshisayo). Amagumbi amancinci ahlala enendawo enye yokungena. Amagumbi amakhulu ahlala enamacala amabini ekungena kuwo, mhlawumbi ucango olungaphambili kunye nolunye ngasemva, okanye ukusuka ngaphantsi komhlaba okanye kwenye indawo enokupakisha indawo yokupaka. Kuxhomekeke kuyilo lwesakhiwo, iminyango yokungena inokunxibelelana ngokuthe ngqo ngaphandle okanye kwindawo eqhelekileyo ngaphakathi, enjengehholo lendibano okanye indawo yokulinda.
IColchester (mamela) yidolophu eyimbali yemarike kunye neyona ndawo inkulu yokuhlala eColchester kwiphondo lase-Essex. IColchester yayisisixeko sokuqala esisekwe ngamaRoma eBritani, kwaye iColchester ibeka njengedolophu yakudala erekhodiweyo yaseBritane. Kwakusekulixesha idolophu enkulu yedolophu yaseRoma iBritane, kwaye lilungu leNethiwekhi yakudala yeedolophu zaseYurophu.Sekwe kwi-River Colne, iColchester yi-50 miles (i-80 km) empuma yeLondon kwaye idityaniswe kwikomkhulu ngohola wendlela u-A12 nesikhululo sikaloliwe esikuMgca wePhondo eliKhulu. Ibonwa njengedolophu edumileyo yabahambi, kwaye ingaphantsi kwe-30 yeekhilomitha (i-48 km) ukusuka eLondon Stansted Airport kunye ne-20 miles (i-32 km) ukusuka kwizibuko labakhweli se Harwich. IColchester ilikhaya leColchesterchester neColchester United yeBhola ekhatywayo. Isiduko ngu-Colcestrian.